Manoloana ny doro-tanety sy ny oram-baratra, ‘’Inona ny fiovaovan’ny toetrandro ?’’ hoy ny fanontanian’ireo Aostraliana. · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Desambra 2018 3:51 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Italiano, Español, Français, 繁體中文, English
Doro tanety sy ny oram-baratra- pikantsarin’ny Sampan-draharaha mpamantatra ny Toetrandro any Aostralia.
Niteraka adihevitra tamin’ny Aterineto tany Aostralia ny doro tanety tany Queensland sy ny oram-baratra tany Sydney mikasika ny antony mahatonga ny fikorontanan'ny toetrandro ao anatin'ny fepetra ara-toetrandro tafahoatra.
Niteraka hain-trano miisa 200 ny maripana mihoapampana tany Queensland Afovoany ny Alarobia 28 Novambra 2018, ary nosokajiana ho nitondra voina tafahoatra ny sasany tamin’izy ireo. Olona miisa 8.000 no nafindra toerana tao amin’ny tanàna kelin’i Gracemere, izay mifanila amin’i Rockhampton, renivohi-paritra.
Tany amin’ny lavidavitra any Atsimo, tamin’io andro io ihany, safotry ny rano i Sydney, tao anatin’ny ora roa monja, orana mitovy amin'izay mirotsaka ao anatin'ny iray volana, na hoe 100 milimetatra. Nisy ny tondra-drano lehibe, ny fahasimbana ara-pitaovana, ary voalaza fa olona roa no maty. Naningotra ny sisin’ny trano lehibe iray ny rivo-doza kely nandalo.
Na dia teo aza ny lazan‘ny ’firenena ho main’ny masoandro’, ny ‘haintany sy ny oram-batravatra’’, dia maro ny Aostraliana no nanome tsiny avy hatrany ny fiovaovan’ny toetr’andro tamin’ireo zava-nitranga mahazatra ireo :
Rehefa nitsangana avy teo ampandriana aho dia nahita ny vaovao, navelako nandritra ny dimy minitra aloha ny politika, manantena aho fa tsy naninona ireo namako tao amin’ny Twitter tany Sydney, any amin’ny morontsiraka Atsimo sy any Queensland- tena toetr’andro nampanonofy ratsy tanteraka izany, eny fotoana izao hiresahana ny fiovaovan’ny toetr’andro.
Moa ve tonga ny fotoana hihainoana ireo mpahay siansa rehefa nahita ny antsasaky ny morontsiraka nirehitra ary ny antsasany ao anaty rano,?
Hevitra izay tsy nitovian'ny rehetra. Nanamafy ny sasany fa tsy manaporofo ny fifandraisany ny zava-nitranga tamin’ny toetrandro maningana. Namaly izany ity sioka avy amin’ny tranonkalam-baovao iray ity :
Raha ny fomba fijery ny fotoana iray manokana amin’izao fotoana dia ho adalàna izany. Efa nitranga imbetsaka teo amin’ny tantara ny loza voajanahary ara-toetr’andro ratsy indrindra. Kanefa ny olona tsy nanana ny marika ‘’fikorontanan’ny toetr’andro’’ holazaina amin'ny manodidina.
Liana kokoa tamin’ny sary lehibe i Melanie Elron :
Na izany aza dia tsy zava-baovao ny tafio-drivotra tany Sydney.Tadidinareo ve ny oram-baratra narahana havandra hafahafa tamin’ny taona 1999 ?Tsy porofon’ny fiovan’ny toetr’andro izany. Ny fikarohana natao maharitra sy ela no manaporofo ny fikorontanan’ny toetr’andro.
Lohahevitra mafana amin’izao fotoana izao ny fandraisana andraikitra na koa ny tsy fandraisana andraikitry ny governemanta Aostraliana. Kisendrasendra no namoahan’ny Firenena Mikambana tamin'io andro io ny tatitra fanaony. Araka ny voalazan’ny ONG Aostraliana Climate Council :
Nilaza ny TATITRA VAOVAO IRAY AVY AMIN’NY FIRENENA MIKAMBANA fa i Aostralia, miaraka amin’ireo firenena toa an’i Arabia Saodita sy Etazonia, dia tsy mizotra mankany amin’ny fanatrarana ny tanjon’i Paris amin’ny taona 2030 momba ny toetrandro.
Nanameloka mivantana ireo politisiana (antsoina hoe ‘pollies’) eto i Jonathan Meddings :
Doro tanety nikoizana indrindra tany Queensland. Ora-mikija nikoizana indrindra tany Sydney. Haintany nikoizana indrindra tany amin’ny faritry ny morontsiraka antsinanana. Toy izany ny fiovan’ny toetrandro. Nandritra ny fahamaizan’i Queensland sy ny safo-drano tany Sydney, tsy sahy niatrika ny zava-misy ny ankamaroan’ny ‘pollies’. Tsy dia tsara loatra ho azy ireo.
Nandritra izany, nihetsika ihany koa ireo mpianatra tamin’ny alàlan'ny fanajanonana ny fianarany mba handray anjara tamin’ny fitokonan’ny sekoly ho amin’ny hetsika ho an’ny toetr’andro manerana ny firenena rehetra :
Jereo ity tatitra mahafinaritra momba ny Junkee ity miaraka amin’ny sary mahafinaritra ahitana ireo mpianatra rehetra izay manentana any amin’ny vondrom-piarahamoniny mba hihetsika ho an’ny toetrandro
Nanaitra ny Praiminisitra Scott Morrison ny hetsika nataon’izy ireo, izay niantso ho amin’ny ‘fampihenana ny fikatrohana ka hifantoka amin’ny fianarana any an-tsekoly’’ bebe kokoa. Tao amin’ireo tambajotra sosialy, maro ireo nihandany tamin’ireo mpianatra :
Misaotra an’ireo mpianatra any an-tsekoly izay mijoro eo anatrehan’i Scott Morisson sy ny heloka tsy fandraisana andraikitra avy amin’ny governemantany momba ny fiovan’ny toetrandro. Ny fahitan’i ScoMo ireo mpianatra tsy miraharaha ny politika sa ny hoavy.
Tena nety tokoa ny nataon’ity mpianatra ity ! ( eo amin’ny sora-baventiny izay mivaky hoe: ’’Raha naranin-tsaina ianareo dia ho any am-pianarana izahay’’)
Handrafitra lohahevitra lehibe amin’ny fifidianana federaly Aostraliana izay hotontosaina amin'ny volana Mey amin’ny herintaona ny fikorontanan'ny toetrandro.